Mootummaan Cehumsaa Sudaan Wal-Waraansa Itoophiyaa Keessaa Hammaachaa Dhufee Irratti Yaadoo Qabu Ibse
Mootummaan Cehumsaa Sudaan naannoo daangaa biyya isaatti kan argamtu, kutaa Itiyoophiyaa – naannoo Tigiraay keessatti wal-waraansi hammaachaa deemuu isaatti yaaddoo qabu ibsee, akka gareeleen martinuu wal-waraansa dhaabanii, wal-dhibdee gidduu isaanii karaa nagaa fi mariin furatan waamicha dhiheessee jira.
Mootummaan Kaartum maadheffate kun, akka hoogganoonni biyyoota Afrikaa fi hoogganoonni ideal-addunyaa nagaa fi sabatiinsa naannoo sanatti buusuu irratti gargaaranii fi Itiyoophiyaa keessatti hiree nagaa buusuu tarkaanfachiisanillee waamicha godhee jira, jechuun Maayikil Atiit Kaartum irraa gabaasee jira.
Daangaan Itiyoophiyaa Waliin Qabnu Cufamee Jira:Sudaan
Gama biraatin, Aaangawoonni Kasalaa kan kutaa Sudaan yeroo muddamsi waraanaa naannoo Tigiraay keessatti guyyoota dhihoo as hammaatee jiru kanatti daangaa Itiyoophiyaa waliin qaban cufachuu isaanii beeksisanii jiran.
Garu uummata hidhannoo hin qabne kan walwaraansa dheessuun gara daangaa dhufuuf gargaarsii ni godhamaaf jedhamee jira.
Namnii hidhannoo qabatee daangaa Sudaanti ce'huun Kasalaa seenee dirree wal waraansaa akka taasisuu garu hin ehamnu jedhan aangawaan Kasalaa.